Kitra atsy Afrika : misaona ny Elefantan’i Côte d’Ivoire | NewsMada
Sembain-drahona ny baolina kitra ivoarianina, ankehitriny. Nodimandry ny alakamisy 31 desambra lasa teo, tany Dusseldorf, Alemaina, mantsy i Steve Gohouri. Vodilaharan’ny Elefantan’i Côte d’Ivoire, teo aloha, ary nilalao tao amin’ny Steinbach, ekipa diviziona fahefatra any Alemaina izy.
Araka ny tati-baovaon’ny polisy alemà, tsy hita efa nanomboka ny 12 desambra ny lehilahy.
Tao anaty rano no nahitana ny fatiny, taty aoriana. Nilaza kosa ireo tomponandraikitra fa tsy nisy faritra na vono ny vatany.
Nilaza i Thomas Bardaric, mpanazatrany, fa gaga izy amin’izao tranga izao, ary tsy mino ny tenany fa manana olana manokana izy ka mety ho nitarika izao fahafatesany izao. 34 taona Steve Gohouri izao nodimandry izao. Efa niatrika ny «Can 2008» sy ny «Mondial 2010» izy.
Naneho ny alahelony i Didier Drogba, izay niara-nilalao taminy tao anatin’ny Elefanta. «Very namana sy mpilalao tena miady mafy eny ambony kianja aho. Manolotra ny fiaraha-miory amin’ny fianakaviany ny tenako”, hoy izy.
Raha tsiahivina, in-13 nisalotra ny akanjon’ny ekipam-pirenena i Steve Gohouri. Niatrika fiofanana tao amin’ny ivon-toeran’ny Paris St Germain ny taona 1988 -1999, ary nifindra tany Alemaina, ka nilalao tao amin’ny Borussia Monchengladbach, nanomboka ny taona 2007.